Rugby: hametraka olona sy hidina ifotony ny FTMR 6 | NewsMada
Rugby: hametraka olona sy hidina ifotony ny FTMR 6
Nampahafantatra Rakotondrafara Jean Heriniaina (Naina be), filohan’ny fikambanan’ny tanora mpanao rugby manerana ny firaisana 6, eto Antananarivo (FTMR 6) , omaly, fa manomboka izao, hidina ifotony izy ireo ka hametraka mpitarika roa isaky ny fokontany miisa 192 eto Antananarivo Renivohitra. Anton’izany, hitsinjovana ireo tanora mpilalao rugby amin’ny voina mety hahazo azy ireo.
Nomarihin’i Naina Be fa ireo mpitarika ireo no hanao tatitra aty amin’ny foibe raha toa ka misy fahoriana na tsy fahasalamana na sanatria haintrano. Tanjona izany ny fanatanterahana adidy ary famerenana ny fihavanana sy firaisankina eo amin’ny samy tanora, indrindra fa ny mpilalao baolina lavalava.
Ankoatra izay, miantso ireo mpanao politika ihany koa i Naina Be tsy hanao fitaovana ny mpilalao baolina lavalava eny ambany tanàna ary hampitsahatra ny fifampihantsiana ka hijery ny tombontsoa iraisan’ny rehetra. Nomarihiny fa miara-miasa amin’ny Malagasy rugby ny FTMR 6, ka mangataka ny hanomezana alàlana azy ireo, hahafahany manao fifaninanana sy mamita ireo lalao tsy tontosa tamin’ny taon-dasa. Marihina fa efa 20 taona no nisian’ny FTMR 6 ary manao asa sosialy ihany ankoatra ny baolina lavalava.